Izinhlobo zeRabb.it (2020) - Amawebhusayithi afanayo aphezulu ayi-6 - Uhlu
Rabb.it uhlelo lokusebenza olwenza abasebenzisi bakwazi bukela ama-movie nemibukiso ndawonye. Ilungele abasebenzisi abafuna ukuba nokuhlangenwe nakho okuhle nabangani babo. Ukhiye womhlaba wonke usinyusile isidingo sokwenza isicelo esinjalo. Ilungele abasebenzisi abahlala kude kakhulu. Ungavumelanisa imifudlana ukuze ube nesipiliyoni esihle. Insiza isebenza ngamapulatifomu amaningi afana neNetflix, i-Youtube, namanye amaningi.
Le nsizakalo iyatholakala kuwo wonke amadivayisi ahlukene atholakalayo Muva nje ipulatifomu ibone kabusha. Manje sebaziwa njengoKast. Ungaba nesipiliyoni esihle ngohlelo lokusebenza, kepha muva nje kube nezinguquko eziningi. Kulesi siqondisi, sizoxoxa ngezinye izindlela zokusebenzisa iRabb.it.
Ezinye izindlela ezihamba phambili zeRabb.it - ​​Top 6
URabb.it inezinye izindlela eziningi ezimangazayo ezizayo. Kulezi zinsuku izinhlelo eziningi ezintsha ezinemisebenzi efanayo manje seziphumile emakethe. Abantu bathanda ukuhlala bexhumene. Onjiniyela bohlelo lokusebenza bayathuthuka kuhlelo lokusebenza. U-2020 ube unyaka ogcwele wokuletha izinto ezintsha. Nazi izinketho eziphezulu ezitholakala ku-intanethi. Zilande namhlanje ukuqala ukusakaza nabo bonke abangani bakho manje.
1. Iphathi yeNetflix
Uhlelo lokusebenza lunqoba i-2020. Kuyisengezo esisha esitolo se-google chrome. Bebelokhu behlinzeka abasebenzisi ngezinsizakalo zokuxhumanisa ukusakaza. Ipulatifomu ethandwayo namuhla ye- okuqukethwe kokubuka iyi-Netflix. Isayithi lifinyeleleka kalula kuwo wonke umuntu. Abasebenzisi bangangeza lolu hlelo lokusebenza kuziphequluli zabo ukuxhuma kalula.
Izici nazo ziyamangalisa impela kulokhu okungeziwe. Ikuvumela ukuthi uvumelanise ukusakaza futhi ubuke okuqukethwe ndawonye. Kukonke kuyithuluzi lesoftware eliphelele lokubuka imibukiso yakho oyithandayo. Siyincoma kubo bonke abafundi bethu.
Kukhona ukuvumelanisa bukhoma kwawo wonke amavidiyo owabukayo.
Ungasebenzisa isici somlayezo kubo bonke abahlanganyeli engxoxweni.
Isebenza neHulu, iDisney, ne-HBO futhi.
Abasebenzisi bangenza ngezifiso ama-avatar abo ukuxhumana okulula.
Ukufaka okukodwa ukuze usebenzise.
I-Rave.io iyinkundla yokuxhumana yokuxhumana kwakho. Ilungele abasebenzisi abajabulela ukuzijabulisa kumafoni abo. Unogwaja uyatholakala nakuma-smartphone, kepha awulungele ukusetshenziswa isikhathi eside. Abasebenzisi abaningi babhekana nezinkinga zokulahla njalo. NgeRave.io, abasebenzisi bangaba nezwi kanye nezingxoxo zombhalo nabangane babo.
Uhlelo lokusebenza kulula ukuyisebenzisa kumadivayisi we-Android naku-iOS. Iyanciphisa imfuhlumfuhlu efonini yakho. Isevisi ikhula ngejubane elimangalisayo. Baqala ukunikela ngezici zokubuka zabasebenzisi be-VR futhi.
Ungabuka amasevisi okusakaza ngaphakathi kohlelo lokusebenza ngaphandle kokuwavula.
Isekela amawebhusayithi amaningi nezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Netflix, i-Google Drayivu, i-Youtube, ne-Vimeo.
Ine-setup ye-AI DJ, engadala ama-mashups womculo wakho owuthandayo.
Abasebenzisi bangasebenzisa uhlelo lokusebenza ngokushelela kuwo wonke amadivayisi we-smartphone.
Noma ngubani angaxhumana nabantu abavela emhlabeni wonke ngale nsizakalo.
Ipulatifomu eku-inthanethi liyindlela enhle kanogwaja njengoba yenza ukusakaza kube lula kuwo wonke umuntu. Noma ngubani angafinyelela kwimithombo ehlukile kule webhusayithi. Kukusiza ukuthi ubuke okuqukethwe kalula nabangani bakho. Abasebenzisi bangachitha isikhathi ndawonye futhi benze izinkumbulo.
Ukusakaza ndawonye sekuyinto ejwayelekile yezimpilo zethu kulezi zinsuku. Abasebenzisi bangajabulela i-inthanethi ngokuvumelanisa nabangane babo. Qala ukusakaza amavidiyo, umculo, noma yikuphi okuqukethwe okubukhoma ngale webhusayithi. Kulula kakhulu ukusebenzisa ababambiqhaza bokuqala futhi.
Abasebenzisi bathola isidlali sevidiyo esimangalisayo esivumelanisa konke.
Ungakhuluma nabangani bakho ngesici esilula kodwa esisebenzayo segumbi lokuxoxa.
Ixhasa amapulatifomu amakhulu afana ne-Youtube, Vimeo, namanye amaningi.
Noma ngubani angakha uhlu lwadlalwayo endaweni yesikhulumi ephathini yokulala online nabangani.
Iwebhusayithi ayidingi ukuthi wenze i-akhawunti yokusetshenziswa.
Sekukonke kuyinsizakalo enhle kepha ayisekeli imibukiso ye-TV nezinsizakalo zokusakaza ama-movie njengeNetflix.
Isandiso sedeskithophu sesiphequluli se-Chrome. Abasebenzisi bangayisebenzisa ukuze babuke noma yikuphi okuqukethwe ku-intanethi. Ingxenyekazi isebenza kahle impela, ikakhulukazi ngonyaka wezi-2020. Abasunguli bebeqhakambisa le nsizakalo isikhathi eside. Akudingi ukulandwa okusindayo okunjalo.
Isandiso sihlanganisa kalula okuqukethwe okusakazwayo ngokuhlukile amawebhusayithi okusakaza . Basekela zonke izinhlelo zokusebenza ezinkulu ezaziwayo namuhla. INetflix, iHulu, iDisney Plus, iCrunchyroll, nabanye abaningi. Le sevisi inikeza inguqulo yamahhala ne-premium kubathengi bayo. Ungasebenzisa iningi lezici ngenguqulo yamahhala.
Abasebenzisi bangajabulela ubusuku obuhle be-movie nozakwabo nabangane kuzingxenyekazi ezahlukahlukene.
Le sevisi inikeza ukuvumelanisa kuwo wonke umuntu ukuze ababukeli babuke okuqukethwe okufanayo.
Ungaxhuma futhi ngekhamera yewebhu ekwandisweni kwezingxoxo zevidiyo ngenkathi usakaza.
Ixhasa zonke izinsizakalo ezinkulu zokusakaza ngaphesheya kwesikhulumi.
Banomphakathi wonke oku-inthanethi ngaphezulu kwezicelo eziningi zokusekelwa kwakho.
5. Isikhathi somoya
Uhlelo lwe-Airtime luyinsizakalo enhle yabasebenzisi be-smartphone. Iletha izici ezintsha ezimangazayo ezihlukile endaweni yesikhulumi. Ungajabulela isipiliyoni esingcono kakhulu kunorabi. Isebenza nge-Airtime. Ine-interface enkulu yomsebenzisi esisha kakhulu kithina.
Baguqula indlela esichaza ngayo ukuba nobungani nontanga yethu. Iphumelela ngo-2020 ngokwenza ukuxhumana kube lula esizukulwaneni esilandelayo. Ikholi yevidiyo nabangani bakho ngenkathi ubuka amavidiyo wakho owathandayo. Kukunika amathuba wesikhathi sangempela wokuphendula entweni entsha. Sincoma ukuthi ujabulele ukusakaza isikhathi esihle ngale nsizakalo.
Abasebenzisi bangaxoxa ngevidiyo nabantu abangafika kwabangu-10 ngasikhathi sinye ngale nkundla.
Yabelana ngokuqukethwe nabangani bakho ngalolu hlelo lokusebenza.
Wonke umuntu angahlala exhunyiwe ngale nsizakalo.
URabb.it yindawo enhle kakhulu yokuthi abasebenzisi basakaze okuqukethwe ndawonye. Bekulokhu kunikeza ezinye izingqinamba kubasebenzisi abaningi. Ngalesi siqondisi, sizama ukuphendula izinkinga zakho ngezinye izixazululo. Siyethemba ukuthi i-athikili izixazulula izinkinga. Zama lezi ezinye izindlela ukuze ujabulele ukusakazwa okuhle nabangani.